Tao aorian’ny fifamaliany tamin’i Kevin Durant, dia tsy ampilalaovina i Draymond Green - ewa.mg
Basket - Sport - Tao aorian’ny fifamaliany tamin’i Kevin Durant, dia tsy ampilalaovina i Draymond Green
Tsy i Stephen Curry irery no tsy hiditra amin’ny lalao ataon’i Warriors amin’ny Hawks androany alina, satria raha araky ny nolazain’ny The Athletic , dia nanapa-kevitra i Steve Kerr ny tsy hampanao an’i Draymond Green !
Raha arak’i The Athletic izany, izay voamarin’ny ESPN sy Yahoo ! Sports, dia valin-teny mivantana tamin’ny fifandonana tamin’i Draymond Green sy i Kevin Durant teo amin’ny fiafaran’ny lalao tamin’ny Clippers. Arak’i ESPN ilay fifanolanana dia tsy hoe vita mora ohatr’izany fa ntohy hatrany amin’ny vestiaire to aorian’ny faharesena.
Mbola mihoatra noho izany, raha arak’i Athletic, nanararaotra an’izany fifandonana izany i Green mba handrangitra an’i Kevin Durant mikasika ny Free agency ho avy izao. Ary nanopa azy mihitsy izay raha ny vaovao voaray, ary ireo Warriors no niandany naka an’i Durant tao amin’ny vestiaire. Lazain’i ESPN fa izany no fifanolanana goavana indrindra tao anatin’ny taon amaro tao Golden State.
Na izany na tsy izany, naleon’i Kerr i Green mba ajanona kely ka mba hilamina, ka naleony izany avela eo amin’ny Banc izy androany alina.
Nivoaka tamin'ny : 14/11/2018
Ady - Draymond Green - Kevin Durant - Nba
Ligue 1 – Voka-dalao 5 Decembre 2018 – Amiens SC – AS Monaco ( 0-2 )
Mikotrana ny Barea ankehitriny eny amin’ny kianjan’ny Elgeco Plus
Amin'izao ora hanoratana an'ity lahatsoratra ity diay manao fanazaran-tena eny amin'ny kianjan'ny Elgeco Plus eny amin'ny Bypass ny Barea de Madagascar. Ito manaraka ito ny lien raha hijery izany ianareo : https://www.facebook.com/zone.kitra/videos/2263031310623639/. Hisaorana be dia be ny 24.kitra mizara an'izany video izany.